လှတျမွောကျ နယျမွမှော ကရြာတာဝနျထမျးဆောငျနတေဲ့ မငျးသမီးခြောလေး မွနှငျးရညျလှငျ ရဲ့ ဘဝအကွောငျး – Shwe Likes
ပရိတျသတျကွီးရေ..ဒီတဈခေါ ကျမှာတော့ တညျငွိမျတဲ့အလှလို့တငျစားကွပွီး မွနျမာဝတျစုံတှကေိုသာ အမြားဆုံးဝ တျ ဆငျလရှေိ့တဲ့ မွနျမာေ မျာဒယျနဲ့ သရုပျဆောငျ မွနှငျးရညျလှငျ ချေါ ဒါပေါ့မငျးသမီးလေး အကွောငျးကိုပွော ပပေးသှား မှာပဲဖွဈပါတယျ။ သူမကိုတော့ အနီရောငျဝတျစုံလှ လှလေးနဲ့ ဒါပေါ့လို့ ပွောတဲ့သရုပျဆော ငျတဈယောကျလို့ ပရိတျသ တျတှကေ အသိမြားကွပါတယျ။
ဒါပေါ့မငျးသ မီးဆိုတာ ဘယျလွို ဖဈပျေါလာသ လဲဆိုတော့ ရိုးမဘဏျေ ကျွာငွာရိုကျကူး ရငျးနဲ့ မငျးသမီးမွနှ ငျးရညျလှငျပွောခဲ့တဲ့ ဒိုငျယာေ လာ့စ ကားလုံးလေးပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီကွျောငွာက အရမျးကိုေ အာငျမွ ငျသှားတဲ့အ တှကျ ပရိတျသတျေ တှက လူမှုကှနျယ ကျပျေါမှာ ဒါပေါ့လို့သုံးပွီး စကားပွောလရှေိ့လာကွပါတယျ။
တဈခုခုကိုထောကျ ခံတော့ မယျဆိုရငျ မငျးသမီးရဲ့ပုံကိုသာပွ ပီး ပွနျဖွတောက ပရိတျသတျေ တှကွားထဲမှာ hit ဖွဈလာ ခဲ့ပါတယျ။ ဒါပေါ့ ဆိုတဲ့စ ကားလုံးက မွနျမာနိုငျငံရဲ့ Social Media ဘနျးစကား တဈခုအဖွဈ ရပေနျးစား ကြျောကွားခဲ့ပါတယျ။
မွနှငျးရညျလှငျက သူမရဲ့ ရိုကျကူးေ ရးအမှတျတရေ တှထဲကမှ ဒိုငျယာလော့ အဖွဈနဲ့ပွောခဲ့ရတဲ့ ဒါပေါ့အပွငျ ကွျောငွာရို ကျကှငျးက တညျးဖွတျ လိုကျတဲ့ တဈခွားစကာွးေ ပာခနျးေ တှရှိပမေယျ့ ဒီ”ဒါပေါ့”စကားလုံးလေးက အခုလောကျေ ပါကျသှားမယျလို့မ ထငျခဲ့ပါဘူးတဲ့။
သူမအနနေဲ့ အခုလိုေ အာငျမွငျမှုတှရေရှိ ခဲ့တာဟာ Artist and Flim Production ရဲ့နှလုံး သားအရငျးခံပွီး ကွိုးစားပေးခဲ့တဲ့ teamwork တှကွေောငျ့ပါတဲ့။ သူမနဲ့အတွူေ ကျာငွာမှာ တှဲဖကျသရု ပျဆောငျခဲ့ပေး တဲ့မောငျလေး ညီမလေးတှနေဲ့ ပြျောပြျော ရှငျရှငျပဲ ရိုကျကူးရေးကိုဖွတျ သနျးခဲ့တာဖွဈပွီး ဒီစကားလုံးေ လး၂လုံးပဲပွောခဲ့ရတဲ့အတှကျ စိတျမကောငျးဖွဈတာ မြိူးလညျး သူမက မရှိခဲ့ပါဘူးတဲ့။
ဟုတျပါတယျေ နျာ. အရေ အတှကျထကျ အရညျအခြ ငျးပဲလိုတယျဆိုတာ မငျးသမီးက သကျသပွေသှားခဲ့ပါပွီ။ သူမပါဝငျထား တဲ့နရောတ ဈခုကို ပရိတျသ တျတှကေ ခဈြစရာကောငျး တဲ့အမွငျနဲ့ မွငျပေးခဲ့တဲ့အတှကျ သူမဘဝရဲ့ အနုပညာမှတျတို ငျကောငျးတဈ ခုရောကျခဲ့ ရတယျလို့ ပွောသှားခဲ့ပွီး နောကျတဈခါဒီ လိုမြိူး အခှငျ့အရေးေ ကာငျးတောငျ ရလာနိုငျမယျ မထငျပါဘူးတဲ့။
အငျတာ ဗြူးတှမှော ပရိတျသတျကို အမွဲကြေးဇူးတငျတဲ့ အကွောငျးထညျ့ွေ ပာလရှေိ့တဲ့ မငျးသမီး မွနှငျးရညျလှငျ ရဲ့ ငယျဘဝဖွ တျသနျးလာတဲ့ အနုပညာလ မျးကွောငျးကို ကြှနျမတို့နဲ့ အတူ ကွညျ့လိုကျရအောငျ။ သရုပျဆောငျ မွနှငျးရညျလှငျ ကို ၁၉၈ရခုနှဈ ဇနျနဝါရီလ ၁၂ရကျနမှေ့ာ မှေးဖှားခဲ့ပွီး ကြောငျးပ ညာရေးကိုတော့ သူငယျတနျးကနေ တဈတနျးအထိလှိုငျကြောငျးမှာတကျခဲ့ပွီး ကမာရှတျ၂မှာ အထကျတနျးအောငျခဲ့ပါတယျ။
နောကျမှာတော့ ဒဂုံတက်ကသိုလျမှာ Psychology အထူးပွုဘာသာရပျဘှဲ့ကိုရရှိခဲ့ပါတယျ။ မှေးခငျြးမောငျနှမလေးယောကျထဲမှာ အထှေးဆုံးသမီးေ လးဖွဈပွီးတော့ အလွှ ပငျရတာကိုလညျးင ယျငယျထဲက အရမျးကွိုကျပါတယျတဲ့။ ကြောငျးတကျနေ စဉျတဈလေြှာကျ ဘငျခရာအဖှဲ့တှေ၊ အလှမယျပွိုငျပှဲတှလေညျး ပါခဲ့ဖူးပါတယျတဲ့။ ပုံဆှဲတာကိုလညျး ဝါသနာပါတဲ့သူမက သူမြားနဲ့မတူပဲ ရယျစရာတှေ ကိုလညျး ပွောတတျပါတယျတဲ့။
အနုပညာ လှုပျရှား မှုတှကေိုတော့ ၂၀၁၀ ခုနှဈကနေ စတငျခဲ့ပွီးတော့ အဆိုတျော စိုငျးစိုငျးခမျးလှိုငျရဲ့ Ever Golli သီခငျြးမှာ ပထမဆုံးပှဲဦးထှကျပါဝငျခဲ့ပါတယျ။ အဆိုတျောစိုငျး စိုငျးခမျးလှိုငျ နဲ့ မိတျဆှတေဈဦးဖွဈတာကွောငျ့ သီခငျြးမှာပါဝငျခှငျ့ရခဲ့တယျလို့ သူမကဆိုပါတယျ။ ၂၀၁၁မှာ ဖကျရှ ငျနဲ့ပကျသကျတဲ့ စီးပှားရေးကွျောငွာဘလျေဘုတျတှကေိုစတငျရိုကျကူးခဲ့ပွီး ထိုငျမသိမျးတှကေို တငျ့တငျ့ရငျ့ ရငျ့ဝတျပွပွီးကွျေွာ ငာတှရေိုကျကူးနိုငျခဲ့ တဲ့မငျးသ မီးခြောပဲဖွဈပါတယျ။
၂၀၁၂ခုနှဈမှာတော့ မွနျမာ့ရုပျရှ ငျထူးခြှနျဆု ဆုပေးပှဲ အကယျဒမီဗနျးကို ငျအဖွဈ ပါဝငျခဲ့ပွီး ၂၀၁၃ခုနှဈမှာတော့ 8Days မှာရိုကျကူး ခဲ့တဲ့ Snap shot တဈပုံမှာ အကြီလညျဟိုကျ ပုံမကျြနှာဖုံး တဈပုံပါလာရာကနေ ပရိတျသတျတှဝေဖေနျတာကိုခံခဲ့ရပွီး photo model တဈေ ယာကျအဖွဈနဲ့ အနုပညာ အလုပျေ တှကို ရပျနားလိုကျပါတယျ။ သူမက အနုပညာအသို ငျးအဝိုငျးရှိတဲ့ သူမဟုတျပဲ အပွငျလောကကနေ အသိမိတျဆှေေ တှကွောငျ့ဝ ငျလာခဲ့တာေ ကွာငျ့ ပွငျးထနျတဲ့ဝဖေနျမှုတှနေဲ့ ညဈညဈညမျးညမျးပွော တာမြိူးတှကေို ခံနိုငျရညျမ ရှိဘူးလို့ ပွောပွခဲ့ပါတယျ။
ရုတျတရကျကို ယျ့အကွော ငျးကို သခြောမသိပဲ ဝဖေနျတာ ကိုမခံနိုငျခဲ့တာကွောငျ့ ဒေါသနဲ့ွေ ပာထှကျတဲ့ စကားတှအေတှကျ အခုအခြိနျမှာနောငျတရတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ အရငျ scandal ဖွဈခဲ့တဲ့ကာ လအားဖွငျ့လညျး Facebook တှငျကယျြခါစဖွဈ တာကွောငျ့ sensitive ဖွဈနခေဲ့ တာလညျး ပါမယျဆိုပွီး သူမကပွောပါတယျ။ သူမ အရငျကခန်ဓာကိုယျပွညျွ့ ပညျ့လေးဖွဈ တာကွောငျ့ အခုအခြိနျမှာတော့ ဝိတျခထြားပွီး သှယျကလြှပတဲ့ခန်ဓာကိုယျလေးကို ရရှိထားပါပွီ။
ယောကြားဆ နျတတျပမေယျ့ တဈခုခုဆိုတှေးပူ တတျတဲ့အကြ ငျ့လညျးရှိပါတယျတဲ့။ အရငျက စိတျဆတျတ တျတဲ့အကငျြ့ေ တှကိုလညျး လြှော့ပွီး ဝဖေနျ မှုတှကေို အကောငျးဘ ကျကနေ မွငျပွီးတှေးကွညျ့ဖို့ ကွိုးစားနပေါတယျတဲ့။ သူမက ရှိနတေဲ့ နဂိုသှားတကျ ပုံစံကို မကွိုကျလို့ ပွုပွငျခဲ့ပါသေးတယျ။ သူမက မွနျမာဝတျစုံတှေ အဝတျမြားတယျဆိုပမေယျ့ ဖကျရှငျကကြ လညျးဝတျ တတျပါသေး တယျ။ သူမမှာ အ ရမျးခဈြရတဲ့ခှေးေ လးတဈကောငျလညျး ရှိပါသေးတယျ။ ပါပီလေးကို hello လို့နာမညျပေးထားပွီး နိုငျငံခွားသှား ရငျအတူ ချေါသှားနိုငျဖို့လ ညျးလကေ့ငျြ့ ထားပေးခငျြပါတယျလို့ဆိုပါတယျ။
မငျးသမီးမွနှငျးရ ညျလှငျက အမြိူး သားဖွဈသူဦးမြိူး လှငျနဲ့ ၂၀၁၄ခုနှဈ ဒီဇငျဘာ လမှာလကျထကျခဲ့ပွီး ၂၀၂၀ မှာကှာရှငျးခဲ့ပါတယျ။ ခငျပှနျးေ ဟာငျးဖွဈသူနဲ့အတူရှိစ ဉျတဈလြှောကျ မှာလညျး အနုပညာလုပျငနျးတှကေို ဆကျလုပျဖို့ အမွဲအားပေးခဲ့ ပါတယျတဲ့။ ၂၀၁၆ ခုနှဈ မှာတော့ စကျတငျဘာလ၂၈ရကျမှာတော့ Designer ကောငျးမွတျ၊ Make up လငျးလငျး တို့ ဖနျတီးပေးတဲ့ Moda Magazine မှာ ရုပျရှငျနဲ့ဗီဒီယိုသ ရုပျဆောငျေ ရှမှုနျရတီနဲ့ အတူရိုကျကူးခဲ့ပါတယျ။
၂၀၁၆ နှဈဆနျးပိုငျးမှာတော့ ဒါရိုကျတာအကယျဒမီ မီးပှားရို ကျကူးတဲ့ ဧဒငျရဲ့နတျသမီး ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးကို စိုငျးစိုငျးခမျးလှိုငျ၊ ပိုငျဖွိုးသု၊ ဝငျ့ယမုံလှိုငျ၊ မဂေရပေ့ယျရီတို့နဲ့ ပထမဆုံးရုပျရှငျ ကားကွီးကို ရိုကျကူးခဲ့ပါတယျ။ မငျးသမီးက ဗီဒီယိုဇာတျကား တဈခုမဟု တျပဲ ရုပျရှငျ ကားကွီးကို တနျးပွီးလကျခံလိုကျရတဲ့အတှကျ သူမအနနေဲ့ စိုးရိမျတာမြိူးတှလေညျးရှိခဲ့ပါတယျတဲ့။
ရုပျရှငျလောက နဲ့ပ ကျသကျလို့ သငျတနျးတှလေညျးတ ကျထား တာမြိူးမရှိပဲ ရငျးနှီးတဲ့မိတျဆှတှေေ ကနေ မိတျဆကျပေးလို့ ဧဒငျရဲ့နတျသမီးရုပျရှငျဇာတျကားကွီးမှာ ရှနေ့တေဈယောကျ ကာရိုကျတာကို လကျခံခဲ့တာ ပဲဖွဈပါတယျ။ ပရိတျသတျကိုတော့ ရုပျရှငျရိုကျကူးမှုအပွီး လေးနှဈ အကွာမှာခပြွနိုငျခဲ့ တာဖွဈပွီး သူမရဲ့ မကျြနှာသှငျပွငျနဲ့ အံဝငျခှငျကလြိုကျဖကျတဲ့ နရောဖွဈ တာကွောငျ့ ပရိတျသတျတှကေ တကယျ့ရှနေ့အေစဈတ ဈယောကျ အလား ထငျခဲ့ကွပါတယျ။
ပရိတျသတျေ တှရဲ့ အားပေးမှုတု နျ့ပွနျသံတှကေို ကွားပွီး တဲ့တဈလြှောကျမှာ သူမက အနုပညာအလုပျတှကေို ပွနျလုပျဖို့ စိတျအားထကျသ နျခဲ့ပါတယျ။ မငျးသမီးက သူမရဲ့ အပွငျ ကပုံစံနဲ့မတူပဲ အနုအရှကောငျမေ လးနရောဇာတျ ရုပျမြိူးကိုလညျး စိနျချေါကွညျ့ခငျြ ပါသေးတယျလို့ဆိုပါတယျ။ သူမသဘောကြ ရတဲ့ ဇာတျရုပျကတော့ စိတျမာပွီးဘာမထီ တဲ့သူမြိူးနရောကို သဘောကတြယျလို့ ဆိုပါတယျ။
၂၀၁၈ ခုနှဈမှာေ တာ့ သူမရဲ့ television series တှဖွေဈတဲ့ နှကေန်တာဦး၊ ကွမ်မာနှံ့၊ ဇနီးခြောမြားကှနျရကျ၊ အဆိပျသှေး၊ ဝင်ျကပါရှငျးတမျး၊ တတိယမွော ကျဆုံမှတျတို့ကို MRTV 4, Canal Channel တို့မှာရိုကျ ကူးခဲ့ပါတယျ။ ၂၀၁၉ ခုနှဈမှာတော့ အဆိပျသှေး ၂၊ ငှစေက်ကူရရှကျ၊ အခနျးနံပါတျ၊ မွငျ့မိုရျဝှကျတဲ့ပုစ်ဆာ၊ လိပျပွာနှောငျကွိုး၊ မာယာလှ ညျ့ကှကျ ဇာတျလမျးတှဲတှမှောပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့ပါတယျ။ အဆိပျသှေးဇာ တျလမျးတှဲမှာ ဗီလိနျနရောကနေ ပါဝငျခဲ့ပွီး အရငျကနဲ့မတူ သူမရဲ့တဈမူထူးခွားတဲ့သရုပျဆောငျနိုငျတာကိုတှရေ့မှာပါ။
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ..ဒီတစ်ခေါ က်မှာတော့ တည်ငြိမ်တဲ့အလှလို့တင်စားကြပြီး မြန်မာဝတ်စုံတွေကိုသာ အများဆုံးဝ တ် ဆင်လေ့ရှိတဲ့ မြန်မာေ မ်ာဒယ်နဲ့ သရုပ်ဆောင် မြနှင်းရည်လွင် ခေါ် ဒါပေါ့မင်းသမီးလေး အကြောင်းကိုပြော ပပေးသွား မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမကိုတော့ အနီရောင်ဝတ်စုံလှ လှလေးနဲ့ ဒါပေါ့လို့ ပြောတဲ့သရုပ်ဆော င်တစ်ယောက်လို့ ပရိတ်သ တ်တွေက အသိများကြပါတယ်။
ဒါပေါ့မင်းသ မီးဆိုတာ ဘယ်လြို ဖစ်ပေါ်လာသ လဲဆိုတော့ ရိုးမဘဏ်ေ ကြာ်ငြာရိုက်ကူး ရင်းနဲ့ မင်းသမီးမြနှ င်းရည်လွင်ပြောခဲ့တဲ့ ဒိုင်ယာေ လာ့စ ကားလုံးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကြော်ငြာက အရမ်းကိုေ အာင်မြ င်သွားတဲ့အ တွက် ပရိတ်သတ်ေ တွက လူမှုကွန်ယ က်ပေါ်မှာ ဒါပေါ့လို့သုံးပြီး စကားပြောလေ့ရှိလာကြပါတယ်။
တစ်ခုခုကိုထောက် ခံတော့ မယ်ဆိုရင် မင်းသမီးရဲ့ပုံကိုသာပြ ပီး ပြန်ဖြေတာက ပရိတ်သတ်ေ တွကြားထဲမှာ hit ဖြစ်လာ ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေါ့ ဆိုတဲ့စ ကားလုံးက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Social Media ဘန်းစကား တစ်ခုအဖြစ် ရေပန်းစား ကျော်ကြားခဲ့ပါတယ်။
မြနှင်းရည်လွင်က သူမရဲ့ ရိုက်ကူးေ ရးအမှတ်တရေ တွထဲကမှ ဒိုင်ယာလော့ အဖြစ်နဲ့ပြောခဲ့ရတဲ့ ဒါပေါ့အပြင် ကြော်ငြာရို က်ကွင်းက တည်းဖြတ် လိုက်တဲ့ တစ်ခြားစကာြးေ ပာခန်းေ တွရှိပေမယ့် ဒီ”ဒါပေါ့”စကားလုံးလေးက အခုလောက်ေ ပါက်သွားမယ်လို့မ ထင်ခဲ့ပါဘူးတဲ့။
သူမအနေနဲ့ အခုလိုေ အာင်မြင်မှုတွေရရှိ ခဲ့တာဟာ Artist and Flim Production ရဲ့နှလုံး သားအရင်းခံပြီး ကြိုးစားပေးခဲ့တဲ့ teamwork တွေကြောင့်ပါတဲ့။ သူမနဲ့အတြူေ က်ာငြာမှာ တွဲဖက်သရု ပ်ဆောင်ခဲ့ပေး တဲ့မောင်လေး ညီမလေးတွေနဲ့ ပျော်ပျော် ရွှင်ရွှင်ပဲ ရိုက်ကူးရေးကိုဖြတ် သန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒီစကားလုံးေ လး၂လုံးပဲပြောခဲ့ရတဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်တာ မျိူးလည်း သူမက မရှိခဲ့ပါဘူးတဲ့။
ဟုတ်ပါတယ်ေ နာ်. အရေ အတွက်ထက် အရည်အချ င်းပဲလိုတယ်ဆိုတာ မင်းသမီးက သက်သေပြသွားခဲ့ပါပြီ။ သူမပါဝင်ထား တဲ့နေရာတ စ်ခုကို ပရိတ်သ တ်တွေက ချစ်စရာကောင်း တဲ့အမြင်နဲ့ မြင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက် သူမဘဝရဲ့ အနုပညာမှတ်တို င်ကောင်းတစ် ခုရောက်ခဲ့ ရတယ်လို့ ပြောသွားခဲ့ပြီး နောက်တစ်ခါဒီ လိုမျိူး အခွင့်အရေးေ ကာင်းတောင် ရလာနိုင်မယ် မထင်ပါဘူးတဲ့။
အင်တာ ဗျူးတွေမှာ ပရိတ်သတ်ကို အမြဲကျေးဇူးတင်တဲ့ အကြောင်းထည့်ြေ ပာလေ့ရှိတဲ့ မင်းသမီး မြနှင်းရည်လွင် ရဲ့ ငယ်ဘဝဖြ တ်သန်းလာတဲ့ အနုပညာလ မ်းကြောင်းကို ကျွန်မတို့နဲ့ အတူ ကြည့်လိုက်ရအောင်။ သရုပ်ဆောင် မြနှင်းရည်လွင် ကို ၁၉၈ရခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၂ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီး ကျောင်းပ ညာရေးကိုတော့ သူငယ်တန်းကနေ တစ်တန်းအထိလှိုင်ကျောင်းမှာတက်ခဲ့ပြီး ကမာရွတ်၂မှာ အထက်တန်းအောင်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်မှာတော့ ဒဂုံတက္ကသိုလ်မှာ Psychology အထူးပြုဘာသာရပ်ဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ မွေးချင်းမောင်နှမလေးယောက်ထဲမှာ အထွေးဆုံးသမီးေ လးဖြစ်ပြီးတော့ အလြှ ပင်ရတာကိုလည်းင ယ်ငယ်ထဲက အရမ်းကြိုက်ပါတယ်တဲ့။ ကျောင်းတက်နေ စဉ်တစ်လျှောက် ဘင်ခရာအဖွဲ့တွေ၊ အလှမယ်ပြိုင်ပွဲတွေလည်း ပါခဲ့ဖူးပါတယ်တဲ့။ ပုံဆွဲတာကိုလည်း ဝါသနာပါတဲ့သူမက သူများနဲ့မတူပဲ ရယ်စရာတွေ ကိုလည်း ပြောတတ်ပါတယ်တဲ့။
အနုပညာ လှုပ်ရှား မှုတွေကိုတော့ ၂၀၁၀ ခုနှစ်ကနေ စတင်ခဲ့ပြီးတော့ အဆိုတော် စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ရဲ့ Ever Golli သီချင်းမှာ ပထမဆုံးပွဲဦးထွက်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုတော်စိုင်း စိုင်းခမ်းလှိုင် နဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ဦးဖြစ်တာကြောင့် သီချင်းမှာပါဝင်ခွင့်ရခဲ့တယ်လို့ သူမကဆိုပါတယ်။ ၂၀၁၁မှာ ဖက်ရှ င်နဲ့ပက်သက်တဲ့ စီးပွားရေးကြော်ငြာဘေလ်ဘုတ်တွေကိုစတင်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး ထိုင်မသိမ်းတွေကို တင့်တင့်ရင့် ရင့်ဝတ်ပြပြီးကြော်ြ ငာတွေရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့ တဲ့မင်းသ မီးချောပဲဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၂ခုနှစ်မှာတော့ မြန်မာ့ရုပ်ရှ င်ထူးချွန်ဆု ဆုပေးပွဲ အကယ်ဒမီဗန်းကို င်အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၃ခုနှစ်မှာတော့ 8Days မှာရိုက်ကူး ခဲ့တဲ့ Snap shot တစ်ပုံမှာ အကျီလည်ဟိုက် ပုံမျက်နှာဖုံး တစ်ပုံပါလာရာကနေ ပရိတ်သတ်တွေဝေဖန်တာကိုခံခဲ့ရပြီး photo model တစ်ေ ယာက်အဖြစ်နဲ့ အနုပညာ အလုပ်ေ တွကို ရပ်နားလိုက်ပါတယ်။ သူမက အနုပညာအသို င်းအဝိုင်းရှိတဲ့ သူမဟုတ်ပဲ အပြင်လောကကနေ အသိမိတ်ဆွေေ တွကြောင့်ဝ င်လာခဲ့တာေ ကြာင့် ပြင်းထန်တဲ့ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ ညစ်ညစ်ညမ်းညမ်းပြော တာမျိူးတွေကို ခံနိုင်ရည်မ ရှိဘူးလို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ရုတ်တရက်ကို ယ့်အကြော င်းကို သေချာမသိပဲ ဝေဖန်တာ ကိုမခံနိုင်ခဲ့တာကြောင့် ဒေါသနဲ့ြေ ပာထွက်တဲ့ စကားတွေအတွက် အခုအချိန်မှာနောင်တရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အရင် scandal ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကာ လအားဖြင့်လည်း Facebook တွင်ကျယ်ခါစဖြစ် တာကြောင့် sensitive ဖြစ်နေခဲ့ တာလည်း ပါမယ်ဆိုပြီး သူမကပြောပါတယ်။ သူမ အရင်ကခန္ဓာကိုယ်ပြည့်ြ ပည့်လေးဖြစ် တာကြောင့် အခုအချိန်မှာတော့ ဝိတ်ချထားပြီး သွယ်ကျလှပတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကို ရရှိထားပါပြီ။
ယောကျားဆ န်တတ်ပေမယ့် တစ်ခုခုဆိုတွေးပူ တတ်တဲ့အကျ င့်လည်းရှိပါတယ်တဲ့။ အရင်က စိတ်ဆတ်တ တ်တဲ့အကျင့်ေ တွကိုလည်း လျှော့ပြီး ဝေဖန် မှုတွေကို အကောင်းဘ က်ကနေ မြင်ပြီးတွေးကြည့်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်တဲ့။ သူမက ရှိနေတဲ့ နဂိုသွားတက် ပုံစံကို မကြိုက်လို့ ပြုပြင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ သူမက မြန်မာဝတ်စုံတွေ အဝတ်များတယ်ဆိုပေမယ့် ဖက်ရှင်ကျကျ လည်းဝတ် တတ်ပါသေး တယ်။ သူမမှာ အ ရမ်းချစ်ရတဲ့ခွေးေ လးတစ်ကောင်လည်း ရှိပါသေးတယ်။ ပါပီလေးကို hello လို့နာမည်ပေးထားပြီး နိုင်ငံခြားသွား ရင်အတူ ခေါ်သွားနိုင်ဖို့လ ည်းလေ့ကျင့် ထားပေးချင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
မင်းသမီးမြနှင်းရ ည်လွင်က အမျိူး သားဖြစ်သူဦးမျိူး လွင်နဲ့ ၂၀၁၄ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ လမှာလက်ထက်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ မှာကွာရှင်းခဲ့ပါတယ်။ ခင်ပွန်းေ ဟာင်းဖြစ်သူနဲ့အတူရှိစ ဉ်တစ်လျှောက် မှာလည်း အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကို ဆက်လုပ်ဖို့ အမြဲအားပေးခဲ့ ပါတယ်တဲ့။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် မှာတော့ စက်တင်ဘာလ၂၈ရက်မှာတော့ Designer ကောင်းမြတ်၊ Make up လင်းလင်း တို့ ဖန်တီးပေးတဲ့ Moda Magazine မှာ ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုသ ရုပ်ဆောင်ေ ရွှမှုန်ရတီနဲ့ အတူရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၆ နှစ်ဆန်းပိုင်းမှာတော့ ဒါရိုက်တာအကယ်ဒမီ မီးပွားရို က်ကူးတဲ့ ဧဒင်ရဲ့နတ်သမီး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်၊ ပိုင်ဖြိုးသု၊ ဝင့်ယမုံလှိုင်၊ မေဂရေ့ပယ်ရီတို့နဲ့ ပထမဆုံးရုပ်ရှင် ကားကြီးကို ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ မင်းသမီးက ဗီဒီယိုဇာတ်ကား တစ်ခုမဟု တ်ပဲ ရုပ်ရှင် ကားကြီးကို တန်းပြီးလက်ခံလိုက်ရတဲ့အတွက် သူမအနေနဲ့ စိုးရိမ်တာမျိူးတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့။
ရုပ်ရှင်လောက နဲ့ပ က်သက်လို့ သင်တန်းတွေလည်းတ က်ထား တာမျိူးမရှိပဲ ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတွေ ကနေ မိတ်ဆက်ပေးလို့ ဧဒင်ရဲ့နတ်သမီးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာ ရှေ့နေတစ်ယောက် ကာရိုက်တာကို လက်ခံခဲ့တာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိတ်သတ်ကိုတော့ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးမှုအပြီး လေးနှစ် အကြာမှာချပြနိုင်ခဲ့ တာဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ မျက်နှာသွင်ပြင်နဲ့ အံဝင်ခွင်ကျလိုက်ဖက်တဲ့ နေရာဖြစ် တာကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေက တကယ့်ရှေ့နေအစစ်တ စ်ယောက် အလား ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။
ပရိတ်သတ်ေ တွရဲ့ အားပေးမှုတု န့်ပြန်သံတွေကို ကြားပြီး တဲ့တစ်လျှောက်မှာ သူမက အနုပညာအလုပ်တွေကို ပြန်လုပ်ဖို့ စိတ်အားထက်သ န်ခဲ့ပါတယ်။ မင်းသမီးက သူမရဲ့ အပြင် ကပုံစံနဲ့မတူပဲ အနုအရွကောင်မေ လးနေရာဇာတ် ရုပ်မျိူးကိုလည်း စိန်ခေါ်ကြည့်ချင် ပါသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ သူမသဘောကျ ရတဲ့ ဇာတ်ရုပ်ကတော့ စိတ်မာပြီးဘာမထီ တဲ့သူမျိူးနေရာကို သဘောကျတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာေ တာ့ သူမရဲ့ television series တွေဖြစ်တဲ့ နွေကန္တာဦး၊ ကြမ္မာနွံ့၊ ဇနီးချောများကွန်ရက်၊ အဆိပ်သွေး၊ ဝင်္ကပါရှင်းတမ်း၊ တတိယမြော က်ဆုံမှတ်တို့ကို MRTV 4, Canal Channel တို့မှာရိုက် ကူးခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာတော့ အဆိပ်သွေး ၂၊ ငွေစက္ကူရရွက်၊ အခန်းနံပါတ်၊ မြင့်မိုရ်ဝှက်တဲ့ပုစ္ဆာ၊ လိပ်ပြာနှောင်ကြိုး၊ မာယာလှ ည့်ကွက် ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိပ်သွေးဇာ တ်လမ်းတွဲမှာ ဗီလိန်နေရာကနေ ပါဝင်ခဲ့ပြီး အရင်ကနဲ့မတူ သူမရဲ့တစ်မူထူးခြားတဲ့သရုပ်ဆောင်နိုင်တာကိုတွေ့ရမှာပါ။
ဥက်ကဌ အပွောငျးအလဲလုပျပီးနောကျပိုငျး ရုပျရှငျအစညျးအရုံး ကနေ နှုတျထှကျနကေတြဲ့ သူတှကေို အဘရဲ့ မှေးစားသမီး ရှရေူပါဦး ပွောပွီ